‘गुगल व्वाई’ आदित्य
Topic: ‘गुगल व्वाई’ आदित्य
Author Topic: ‘गुगल व्वाई’ आदित्य (Read 6714 times)
« on: July 30, 2015, 12:44:22 AM »
‘गुगल व्वाई’ आदित्य ‘भगवान’ हुन् ?
'ज्योतिष भन्छन् - आदित्यलाई भगवानको रुप मान्न सकिन्छ'
काठमाडौं, १० साउन । गुगल व्वाइको उपाधि पाएका आदित्य दाहाल अहिले उपचारका क्रममा अमेरिकामा छन् ।
शारीरिक रुपमा अशक्त आदित्य नेपाल र भारतमा उपचार हुन नसकेपछि आफैले रोजेको क्यालिफोर्नियाको स्टेनफोर्ड हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचारका विहीबार अमेरिका उडेका हुन् ।
अमेरिका जानुअघि उनले उपचारका लागि नेपालीहरुबाट टाढा जाँदा दुःख लागेको भन्दै फर्की आउँदा देशमा दिगो शान्ति सहित क्रान्तिकारी अमूल परिवर्तन हुने विश्वास लिएको आफ्ना शुभचिन्तकलाई सन्देश लेखेका थिए । उनी रुँदै अमेरिका उडेका थिए ।
बोल्न, हिँड्न नसक्ने उनले लेखेरै शुभचिन्तकलाई सन्देश दिए । आदित्यको जन्म २०६७ साउन ७ गते भएको थियो । जन्मिएको तीन वर्षसम्म स्वस्थ अरु बच्चा जस्तै हुर्की बढिरहेका आदित्यले त्यसपछि आफ्नो बोली र स्वस्थ शरीर गुमाए । उनी बोल्न र हिडडुल गर्न नसक्ने भए ।
बोल्न र हिडडुल गर्न नसक्ने भएपछि घरमा हेरचाह गरी राखिएका आदित्यमा २०७१ साल असार २५ गते ११ महिनापछि असाधारण शक्ति प्रकट भयो । आधारण शक्ति पाएका आदित्यले त्यो दिनलाई निद्राबाट ब्यूझिउन सफल भएको आफैले भनेका छन् ।
मानव चोलामा ५ वर्षसम्म बालकले न राम्रोसंग बोल्न सकेको हुन्छ, न त खान नै तर आदित्य पाँच वर्षकै उमेरमा विद्धानजस्तै छन् । स्कुलमा क पनि नपढेका पाँच वर्षिय बालक आदित्य विश्वका जुनसुकै भाषामा पनि जवाफ फर्काउने, भूत, वर्तमान र भविष्यबारे विश्वसनीय ढंगले बताउने आसाधारण शक्ति उनमा छ ।
के उनी भगवान हुन् त ?
असाधारण शक्ति पाएको एक वर्षमै आदित्यले भगवानको जस्तै थुप्रै अर्ति उपदेश दिएका छन् । नेताहरुलाई मार्गदर्शन बाटोमा लाग्न सुझाव दिएका छन् । उनले दिएका उपदेशहरु यस्ता छन्:
– कुकर्म गरि याचनाका लागि ईश्वर खोज्दै हिंडेको देख्दा दया जाग्छ, सत्कर्म गरी परमात्मालाई आफ्नै हृदयमा सजाउन सकिन्छ ।
– धन प्राप्तीमा भन्दा ज्ञान प्राप्तीमा समय व्यतित गरौं ।
– लोभ र मोह त्याग, मेरो होइन हाम्रो भन, प्राप्तीमा होइन कर्ममा बिश्वास गर, दया र धर्म नछोड ।
अरुको सेवामा आफूलाई समर्पित गर ।
– भक्ति गरौ, श्रद्धा गरौं,हृदयमा करुणामय प्रेम श्रृजना गरी एकचोटी आफ्नो मुल्यांकन आफैं गरी हेरौं, आफूलाइ परमात्माको सानिध्यमा अवश्य पाउने छौं ।
– बाध्यताभित्र लुकेको यथार्थ सत्य नबुझी मनोभावनाका भरमा कोही कसैलाई कहिल्यै शंका नगर्नु । हिड्ँन र बोल्न नसक्ने आदित्यले लेखेर दिएका यी सुझाव कुनै विद्धानले दिएको भन्दा कम छैन् । यसले पनि आदित्यलाई भगवानको रुपमा चित्रण गर्न सक्छ ।
उनले देशमा जारी घटनाक्रमबारे पनि लेखेरै थुप्रै उपदेश दिएका छन् । यस्ता छन् देशका लागि दिएका उपदेश :
– देशको विडम्बना स्रोत र साधनको अभावमा मुकदर्शक बनेको राज्यको लाचारता देख्दा मन रुन्छ नेपालीको ।
– दाताहरुबाट प्राप्त सहयोगलाइ सही सदुपयोग गरि असहाय जनतालाइ न्याय दिने चुनौति सहितको जिम्मेवारी राज्यको काँधमा आएको छ । ध्यान पुगोस ।
– आर्थिक प्रगतीका सम्भावनालार्इ पहिचान गरी सदुपयोग नगर्दा राष्ट्र गरिबीको चक्रभित्र झन झन रुमल्लिदै छ । ध्यान पुगोस ।
– गास बास र कपासबाट वन्चित बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गरी व्यवहारिक कार्यान्वयन गरे राष्ट्र र नयाँ पिडीका साथ परिवर्तनतिर उन्मुख बन्न सक्छ ।
उनले केही नेताहरुलाई अचम्म पार्ने गरी पनि उपदेश दिएका छन् । आफ्नो घरमा भेट्न आएका नेतालाई आदित्यले आश्चर्यचकित जवाफ समेत दिए । उनले एक बर्ष अघि नै नेपालको संबिधान २०७२ मा बन्ने र नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्ने आश्चर्यजनक कुरा बोलेका थिए । जून अभ्यास अहिले भइरहेको छ ।
त्यस्तै, आदित्यले २०७१ श्रावणमै दीपकुमार उपाध्याय भारतको राजदूत बन्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । सरकारका मुख्यसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई उनले सुहाउँदो जवाफ दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले परिवारलाई नै बालुवाटार बोलाएर भेट्दा आदित्यले भने थिए-‘ नआत्तिनू ! यो अनिष्ट केही समयमा टर्नेछ, अनि मुलुकले काँचुली फेर्नेछ, हजूरका इच्छा पूरा हुने छ, पीएम ज्यू ।’
उनले भेट्न आउने अन्य अतिथिको पनि सजिलै जिज्ञासा मेटाउने गर्छन् । यी सबै गुणले उनलाई भगवानको रुपमा मान्न सकिने ज्योतिष वाशुदेव अधिकारी बताउँछन् । ‘बालक आफैमा शक्तिवान होइन् । यो त भगवानले आफ्ना दुतलाई दिने अद्भुत शक्ति हो । तसर्थ भगवानले आदित्यलाई आफ्नो दूतका रुपमा शक्ति दिएको जस्तो मलाई लाग्छ ।’ उनी आदित्यवमा दैवी शक्ति भएको दाबी गर्छन् ।
Re: ‘गुगल व्वाई’ आदित्य
« Reply #1 on: July 30, 2015, 12:45:52 AM »
गुगल ब्वायको उपाधि पाएका आदित्य दाहालले रुँदै नेपाल छाडेका छन् । आदित्य स्वास्थ्य उपचारका लागि बिहीबार रुँदै अमेरिका उडेका हुन् ।
बिहीवार नै चार वर्ष पुरा गरी पाँचौं वर्ष लागेका आदित्य बाबु शेषराज र आमा ईश्वराका साथमा अमेरिका उडेका छन् । अमेरिका प्रस्थान गर्दा आदित्य लामो समय भक्कानिएका थिए । उनको आफन्तको जमघटमा उनको जन्मोत्सव पनि मनाइएको थियो । आफ्नो जन्मदिनको केट काटेर आदित्य अमेरिकातिर प्रस्थान गरेका छन् ।
उनले अमेरिका प्रस्थान गर्दा नेपाल सरकारलार्इ अचम्मको प्रश्नसमेत लेखेका छन् । उनी लेख्छन्, नेपाल सरकारलाई धन्यवाद । म स्वस्थ भई फर्किने अपेक्षा गरेको छु ।’ पाँच वर्षीय आदित्य बोल्न सक्दैनन् । यद्यपि उनी नेपालीसहित अंग्रेजी, हिन्दी, कोरियान, जापानीज भाषामा लेख्न सक्छन् । आदित्यले अमेरिका जाने निश्चित भएपछि कापीमा-‘म एक महिनापछि फर्कंदा नेपालमा आमुल परिवर्तन वा अनिष्ट हुन्छ भनेर लेखेका थिए ।’
साढे तीन वर्षको उमेरदेखि शारीरीक रुपमा अशक्त बनेका आदित्यको उपचार नेपालमा असम्भव भएपछि अमेरिकातर्फ लगिएको हो । यसअघि नै सरकारले आदित्यको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बोल्न र हिँडडुल गर्न नसक्ने आदित्यसँग असाधारण क्षमता रहेको छ ।
« Reply #2 on: September 07, 2015, 10:36:44 AM »
भारतका कौटिल्य जस्ता होइनन् आदित्य
यी हुन् सात फरक
११ साउन, गते ओनलाईनखबर मा प्रकाशित
भारतको हरियाणा निवासी ७ वषिर्य बालक कौटिल्य पण्डित ‘गुगल व्वाई’ को नामले प्रचारित छन् । सामान्य ज्ञानका कठिन प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्षमताका कारण भारतीय मिडियाले उनलाई गुगल व्वाईको उपमा दिएका हुन् । त्यही सिको गरेर हाम्रा आदित्य दाहाललाई कतिपयले ‘नेपाली गुगल व्वाई’ को संज्ञा दिन्छन् । तर, गुगल व्वाईको नेपाली संस्करण होइनन् आदित्य । मानसिक रुपमा तिक्ष्ण भए पनि कौटिल्य आदित्यको छेउछाउ पनि आउदैनन् ।
किन कौटिल्यभन्दा भिन्न छन् त आदित्य ? पढौं सात फरक :
१. कौटिल्य एकदमै तिक्ष्ण दिमाग भएका बालक हुन् तर असाधारण होइनन् । उनी आफूले पढको, देखेको र सुनेको आधारमा ज्ञानको भण्डार विकास गरेका हुन् । विश्वका २१३ देशको इतिहास र भूगोलमा उनको गहिरो दख्खल छ ।
आदित्यको दिमागी क्षमता भने असाधारण छ । उनी आफूले नदेेखको, नसिकेको, नसुनेको विषयमा पनि जवाफ दिन्छन् ।
२. कोटिल्यमा अध्ययनसँगै क्रमिक रुपमा ज्ञानको भण्डार विकास भएको हो । तर, आदित्यमा साढे तीन वर्षको छँदा एकाएक यस्तो क्षमता उत्पन्न भएको हो ।
३. कौटिल्य शारिरीक रुपमा स्वस्थ र तन्दुरुस्त छन् । तर, आदित्य दुर्बल छन् । आदित्यको शारिरीक दुर्वलता सुरु भएको केहि समयपछि दिमागी क्षमता उजागर भएको हो । बोल्न पनि नसक्ने उनी लेखेर मात्रै जवाफ दिन सक्छन् ।
४. कौटिल्य कक्षा १ मा पढ्ने विद्यार्थी हुन् । उनले विद्यालय र घरमा सिकेर अक्षर चिनेका हुन् । तर आदित्य अहिलेसम्म स्कुल भर्ना भएका छैनन् । उनले कसैको सहयोगबिनै एकाएक अक्षरहरु लेख्न थालेका हुन् । आदित्यले नेपाली तथा अंग्रेजीमा मात्रै नभएर जापानी, रसियन, चाइजिन जस्ता भाषामा पनि शब्दहरु लेखेका छन्, जून कौटिल्यको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो ।
५. कौटिल्यले इतिहास र भूगोलको जानकारी राख्ने भए पनि भविष्यवाणी गरेका छैनन् । आदित्य भविष्यका कुराहरु माथी पनि जवाफ दिन्छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय सुरक्षा चुनौतिका कारण भविष्यवाणि लेखाउन कम गरिएको छ ।
६. शिशु अवस्थामै आदित्यको अध्यात्ममा गहिरो रुची र दख्खल देखिन्छ । उनी मन्दिर जान रुचाउँछन् । धार्मिक अनुष्ठानहरुमा रमाउँछन् । कौटिल्यमा धार्मिक प्रवृत्ति देखिदैन ।
७. आदित्य चेतनामूलक सन्देशहरु खुबै लेख्छन् । आफ्ना सन्देशमा उनी देशको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारका लागि बाटो पनि देखाउँछन् । कौटिल्यको यस्तो क्षमता छैन ।